Dib u bilow! | Martech Zone
Dib u bilow!
Axad, Nofeembar, 26, 2006 Jimco, Oktoobar 24, 2014 Douglas Karr
Mawduuca ol wuxuu bilaabay inuu igu caajisto xoogaa aniga, sidaa darteed waxaan go'aansaday inaan taxaddar ku tuuro dabaysha oo aan runtii ku kariyo goobta. Waxaan bilaabay inaan la bilaabo Meelo jilicsan mawduuca beta oo gebi ahaanba ka dhig. Xitaa waxaan ku daray baarka Google Video, wuxuu sameeyaa raadinta noocyo kala duwan oo tags ah oo ka socda Google Video. Waxaad ka heli doontaa kuwa ugu cadcad halkaas - Seth Godin iyo Tom Peters, iyo sidoo kale astaamo kale oo guud oo ku saabsan shabakadda 2.0, hagaajinta mashiinka raadinta, suuqgeynta internetka, iwm.
Waan ka helay mawduucan maxaa yeelay waxay mudnaanta siisaa bogga. Halkii laga heli lahaa dhinca dhinaceeda (oo aan cidina run ahaantii isticmaalin), mawduucan ayaa ah alaab culeysyo ka hooseysa bogga guriga. Sidoo kale, haddii soo booqde halkan yimaado iyo ka dib markii uu akhriyay qoraalka 'kooban' oo aysan danaynayn… Waxaan haystaa 'la xiriira' qoraallada dhinaca. Waxaa laga yaabaa inay jiraan maqaal halkaas ku jira oo ay jecel yihiin inay akhriyaan.
Waxaan ku sameeyay xoogaa yar oo qaboojin ah mawduuca sidoo kale. Isku dheelitirku waa ballac go'an, sidaa darteed waxaan wax ka beddelay dhammaan qaababka ballac isbeddel ah. 'Squible' ayaa sidoo kale xaddidaysa jilayaasha ku yaal bogga hore (haddii aad jeclaan lahayd) laakiin waxay ka jareysaa waxyaabaha ku jira erayga dhexe haddii taasi ay tahay xadka. Waxaan wax ka beddelay shaqada si aan uga jaro meesha ugu dambeysa ka hor inta aan astaamaha la xaddidin.
Dabcan, waxaa jira sawirada dabka! Waxaan doonayay inaan yara yara xiiso yaraado markaa buluugga qabow ee mawduucaygii hore. Waan arki doonaa waxa dhaca. Waxaan ka yara walaacsanahay in mawduucani uu adeegsado wax yar ajax, oo ka dhigaya waxa ku jira duullimaadka. Waan arki doonaa waxa ku dhacaya natiijooyinkeyga raadinta jirka ee barta cusub. Waxaan rajeyneynaa, dhamaan calaamadaha qotada dheer ee laxiriira waxay keeneen SEO fiican (Raadinta Mashiinka Raadinta).
Inbadan ayaa imanaya! Laakiin waxaan rajeynayaa inaad jeceshahay!
Tags: blogdouglas karrsaamaynta iyo otomaatigabilowga bogga
Manifesto My Farxada
Nov 26, 2006 saacadu markay tahay 10:12 PM
Muuqaal cusub! Madaxa liinta wuxuu siinayaa dareen subaxa hore, aad u wanaagsan.
Nov 27, 2006 saacadu markay tahay 9:35 PM
Cajiib! Horumar aad u yar, waxaan dhihi lahaa. Nadiifi oo fudud. Xayeysiis ma jiro
Nov 28, 2006 at 10: 15 AM
Midabo wanaagsan - aad u firfircoon. Laakiin waa inaan qirto inaan u xiisay Douglas-ka yar ee bogga dushiisa - waxay siisay taabasho shaqsiyadeed oo wanaagsan.